कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख १२ गते बिहिबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख १२ गते बिहिबारको राशिफल !
प्रकाशित : बुधबार, बैशाख ११, २०७६१७:१८ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
वि.सं. २०७६ साल वैशाख १२ गते। बिहीबार। इश्वी सन् २०१९ अप्रिल २५ तारिख। शकसंवत् १९४१। परिधावी संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ चौलागा। वैशाख कृष्णपक्ष। तिथि– षष्ठी, १४:५४ बजेउप्रान्त सप्तमी। नक्षत्र– पूर्वाषाढा, २२:३८ बजेउप्रान्त उत्तराषाढा। योग– सिद्ध, २६:५३ बजेउप्रान्त साध्य। करण– वणिज, १४:५४ बजेदेखि भद्रा, २७:३० बजेउप्रान्त वव। आनन्दादिमा धाता योग। चन्द्रराशि– धनु, २९:०७ बजेउप्रान्त मकर। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:३२ बजे, सूर्यास्त– १८:३३ बजे र दिनमान ३२ घडी ३२ पला।
आफ्नो क्रोधमा काबु राख्नु होला । तपाइँको क्रोध कुनै पनि कार्य या सम्बन्ध बिग्रनुको कारण बन्न सक्दछ । शरीरमा स्फुर्तीको अभाव रहनेछ । मानसिक अस्वस्थताको स्थितिमा कुनै पनि कार्य नगर्नु होला । कुनै धार्मिक यामंगालिक कार्यमा तपाइँको उपस्थिति रहनेछ । तिर्थ यात्रामा जाने अवसर मिल्न सक्दछ । नोकरी व्यवसायको स्थानमा या परिवारमा मनमुटाव आउन सक्छ ।
कार्य सफलतामा विलम्ब तथा शारीरिक अस्वस्थताको कारण निराषताको भावना महशुस गर्न सक्नु हुनेछ । अत्याधिक कामको बोझले थकान र मानसिक निराषता छाउनेछ । प्रवासमा विघ्न आउने सम्भावना छ । नयाँ कार्यको आरम्भ नगर्नु होला । खानपानमा ध्यान राख्नु होला । योग्य ध्यानको माध्यमबाट मानसिक रुपमा स्वस्थ रहन सक्नु हुनेछ ।
शारीरिक र मानसिक ताजापन र प्रफुल्लताको अनुभव हुनेछ । कुटुम्बीजन तथा मित्रको साथ प्रवास एवम् पार्टीको आयोजना हुनेछ । मनोरंजनको लागी सबै सामाग्री आज उपलब्ध हुनेछ । सुन्दर वस्त्र, उत्तम भोजन र वहान सुख प्राप्त हुनेछ । विपरीत लिंगीय पात्रको तर्फ अधिक आकर्षण हुनेछ ।
आजको दिन तपाइँलाई खुसि र सफलता मिल्नेछ । पारिवारिक सदस्यको साथ घरमा सुख शान्तीले दिन व्यतित हुनेछ । नोकरी गर्नेहरुको लागी लाभ हुनेछ । प्रतिस्पर्धीलाई परास्त गर्न सक्नु हुनेछ । कार्यमा यश मिल्नेछ । स्त्री मित्रको भेटले आनन्द प्रदान गर्नेछ । आफ्नो अधीनस्थ व्यक्ति र सहकर्मीको सहयोग प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ ।
लेखन, साहित्यको क्षेत्रमा केहि नयाँ गर्ने प्रेरणा मिल्नेछ । विद्यार्थीले अध्ययनमा उत्तम प्रदर्शन गर्न सक्नेछन् । प्रणयमा सफलता र प्रिय व्यक्तिको साथ भेटघाटले मन हर्षित हुनेछ । स्त्री मित्रको अधिक सहयोग मिल्नेछ । शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । धार्मिक परोपकार का कार्य गरेर धन्यताको अनुभव गर्नु हुनेछ ।
आजको दिन हरेक कार्यमा प्रतिकूलताको अनुभव गर्नु हुनेछ । स्वास्थ्य खराब हुनेछ । मन चिन्ता ग्रस्त रहनेछ । पारिवारिक सदस्यको साथ मनमुटाव हुनुको साथै कुटुम्बमा अशान्ती छाउनेछ । सार्वजनिक रुपमा मानहानी हुने सम्भावना छ । पानीको डर रहनेछ । जलाशयबाट टाढै रहनु होला । स्थायी संपत्ति, वाहन आदि कागजमा हस्ताक्षर गर्नु अघि विचार पुर्याउनु आवश्यक छ ।
शुभ या धार्मिक अवसरमा यात्रा प्रवासको आयोजना हुनेछ । भाई-बन्धुको साथ मैत्रीपूर्ण वातावरणमा घरेलु प्रसङ्गको चर्चा हुनेछ । व्यावहारिक अवसरमा बाहिर जानु हुनेछ । विदेशबाट राम्रो समाचार आउनेछ । नयाँ कार्यको आरम्भ गर्न सक्नु हुनेछ । धन लाभको योग छ । पूंजी निवेशको लागी अनुकुल दिन रहेको छ ।
पारिवारिक कलह र द्वेष नहोस् यसको ध्यान राख्नु होला । पारिवारिक सदस्यको साथ मनमुटावबाट बच्नु होला । मनमा उत्पन्न भएका नकारात्मक विचारबाट टाढा रहनु होला । विद्या प्राप्तिमा अवरोध आउनेछ । अनावश्यक धन खर्च नहोस् यसको पूर्ण ध्यान राख्नु होला । शार्फिरिक तथा मानसिक अस्वस्थताले निराषता ल्याउनेछ ।
शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ । तीर्थयात्रा हुने सम्भावना छ । संगी सम्बन्धी र मित्रको आगमनले मन खुसी रहनेछ । दाम्पत्य जीवनमा निकटता र मधुरता रहनेछ । मान- प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । स्वादिष्ट भोजनको स्वादले आनन्द प्राप्त हुनेछ ।
अधिक परिश्रममा कम सफलता मिल्दा मनमा निराषताको भावना छाउनेछ । पारिवारिक वातावरण अशान्त रहनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । दुर्घटनाबाट बच्नु होला । व्यावसायिक कार्यमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्नेछ । धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा भाग लिनु हुनेछ । धार्मिक कार्यको निम्ति धन खर्च हुनेछ ।
नयाँ कार्य शुरुवात गर्न सक्नुका साथै त्यस बारे योजना बनाउन सक्नु हुनेछ । नौकरी या व्यवसायमा लाभ प्राप्त हुनेछ । स्त्री मित्र तपाइँको प्रगतिको सहायक बन्नेछन् । आर्थिक लाभको दृष्टिले निकै राम्रो दिन रहेको छ । रमणीय स्थलमा पर्यटनको आयोजना हुनेछ । समाजमा ख्याती बढ्नेछ । सन्तानको प्रगती हुनेछ ।
नौकरी या व्यवसायमा सफलता पाउँदा तथा शिर्ष अधिकारीहरुको प्रोत्साहक व्यवहारले अत्यन्त प्रशन्नताको अनुभव गर्नु हुनेछ । व्यापारीको व्यापारमा वृद्धि हुनेछ । पिताको तर्फबाट लाभ हुनेछ । आयको मात्रा बढ्नेछ । मान सम्मानमा उच्च पद प्राप्त हुनेछ ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन हेर्नुहोस् , आज जेष्ठ २७ गते सोमबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज १२ गतेको राशिफल
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज मंसिर ७ गतेको राशिफल
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन १८,शनिबारको राशिफल !